के हुन्छ बेलाबेलामा वी’र्य नफाल्दा ? यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ ! - Mitho Khabar
June 28, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on के हुन्छ बेलाबेलामा वी’र्य नफाल्दा ? यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ !
नाई मलाई त्यही केटा चाहिन्छ भन्दै युवकको घरबाहिर यस्तो अवस्थामा भेटिन यी युवती
यी रोग लागेका मानिसले भुलेर पनि नखानुस् काउली ज्यानै जान सक्छ
एपेन्डिसाइटिस भनेको कस्तो रोग हो ? कस्ता हुन्छन् यसका लक्षणहरु ?